NPK Compound Fatịlaịza Extrusion Granulation Production Line - YiZheng Arọ Machinery Co., Ltd.
Chain efere Composting Turner Machine
Ngwongwo Hydraulic Comost Turner
Ugboro abụọ ịghasa Composting Turner
Vetikal Fermentation tank
Forklift Comdị Composting Equipment
Onwe-propelled Composting Turner Machine
Roll Extrusion Onyinye Fatịlaịza Granulator
Typedị Ọhụrụ Organic Fatịlaịza Granulator
Rotary Drum Compound Fatịlaịza Granulator
Disc Organic & onyinye fatịlaịza Granulator
Typedị Ọhụrụ Organic & Compound Fatịlaịza Granulator
Typedị Ọhụrụ Organic & Compound Fatịlaịza Granulator Machine
Ewepụghị-anwụ Extrusion granulator
Ugboro abụọ ịghasa Extruding Granulator
Ọkara Organic Fatịlaịza Ihe Iji Crusher
Vetikal Chain Fatịlaịza Crusher Machine
Abụọ-adọ Fatịlaịza Crusher Machine
Ugboro abụọ-axle Chain Crusher Machine Fatịlaịza Crusher
Fatịlaịza Urea Crusher Machine
Chemical Fatịlaịza onu Mill Machine
Ahịhịa & Wood Crusher
Ugboro abụọ aro Fatịlaịza igwekota igwe
Kwụ fatịlaịza igwekota
Disc igwekota igwe
Ngwakọta fatịlaịza BB
Vetikal Fatịlaịza igwekota
Fatịlaịza draya & oyi Series
Rotary Single Cylinder Ihicha igwe na Nhazi Fatịlaịza
Rotary Drum Jụrụ Igwe
Rotary Fatịlaịza mkpuchi igwe
Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ
Highlọ ọrụ okpomọkụ dị elu arụ ọrụ Fan Fan
Cyclone Powder Coljá mkpoko
Machine Counter Flow Jụrụ
Rotary Drum myọcha Machine
Linear jijiji Screener
Rubber echebe ebu Machine
Portable Mobile echebe ebu
Nnukwu Ogwe Akụkụ Na-ebu Nnukwu Oghere
Akpaka Dynamic Fatịlaịza batching Machine
Ghasa Extruding iwepu Solid-Liquid separator
Vetikal Disc inggwakọta feeder Machine
Na-adọnye & Ngwa Nri
Akpa na-arụ ọrụ na-akpaghị aka
Ugboro abụọ Hopper quantitative Packaging Machine
Organic Fatịlaịza Now Polishing Machine
Static Fatịlaịza batching Machine
Ọchịchọ nsị Solid-mmiri mmiri separator
Organic fatịlaịza mmepụta akara
Okwu mmalite nke ahịhịa na-emepụta fatịlaịza
Obere organic fatịlaịza mmepụta akara.
Powdered organic fatịlaịza mmepụta akara
granulated organic fatịlaịza mmepụta akara.
20 000 ton Organic Fatịlaịza Production Line
30,000 ton organic fatịlaịza mmepụta akara
50,000 tọn organic fatịlaịza procution line
Onyinye fatịlaịza mmepụta akara
Onyinye Fatịlaịza Production Line
No-ihicha Extrusion onyinye Fatịlaịza Production Line
NPK Onyinye Fatịlaịza Extrusion Granulation Production Line
20,000 ton onyinye fatịlaịza mmepụta akara
30,000 ton compound fatịlaịza mmepụta akara
50,000 tonye fatịlaịza mmepụta akara
Ihe Ọmụma Akụrụngwa
Anyị nwere ahụmahụ zuru ezu na ahịhịa na-enweghị eriri extrusion na-enweghị eriri. Ọ bụghị naanị na anyị na-elekwasị anya na usoro ọ bụla njikọ na usoro mmepụta, mana anyị na-aghọtakwa usoro nkọwa nke usoro mmepụta ọ bụla na-eme nke ọma ma na-ejikọ ọnụ. Usoro mmepụta zuru ezu bụ otu uru kachasị na mmekọrịta gị na Yizheng Heavy Industries. Anyị na-enye usoro nhazi nke ahaziri iche maka mkpa ndị ahịa.
Ekwentị: + 86-18621801335
Ọ dịghị ihicha extrusion granulation mmepụta akara nwere ike na-emepụta elu, ọkara na ala ịta onyinye fatịlaịza nke dị iche iche kụrụ. Mmepụta akara adịghị mkpa nkụ, na obere ego na obere oriri ike.
The ala enweghị ihicha extruding granulation nwere ike e mere n'ime ahụ nke dị iche iche shapes na nha na ike extruded na-emepụta dị iche iche nha.
Onyinye fatịlaịza nwere àgwà nke edo edo, na-enwu gbaa agba, mma kwụsiri ike, na mbibi dị mfe ka etinye site na kụrụ. Karịsịa, ọ dịtụ mma maka mkpụrụ na-eto fatịlaịza. Kwesịrị ekwesị maka ụdị ala na ọka wit niile, ọka, egusi na mkpụrụ osisi, ahụekere, akwụkwọ nri, agwa, okooko osisi, osisi mkpụrụ osisi na ihe ọkụkụ ndị ọzọ. O kwesịrị ekwesị maka isi fatịlaịza, fatịlaịza, ịchụso fatịlaịza, fatịlaịza na mmiri.
Ngwaọrụ dị maka mmepụta fatịlaịza organic
Ngwaọrụ maka imepụta fatịlaịza na-agụnye urea, ammonium chloride, ammonium sulfate, ammonia mmiri mmiri, ammonium monophosphate, diammonium phosphate, potassium chloride, potassium sulfate, tinyere ụfọdụ ụrọ na ndị ọzọ fillers. A na-agbakwunye ihe ndị dị ndụ dị ka mkpa ala si dị:
1. Anụcha Anụmanụ: ọkụkọ, akwọ ezi, nsị atụrụ, ịbụ ehi, nsị ịnyịnya, nri oke bekee, wdg.
2. Ulo oru ulo oru: nkpuru osisi vaịn, mmanya slag, ahihia azu, ahihia ahihia, ahihia biogas, ahihia ahihia, wdg.
3. Ugbo ala ubi: ahihia ahihia, achicha soybean, uzuzu, wdg.
4. Ngwongwo ulo: ihe mkpofu nke kichin
5. Sludge: ime obodo mepere emepe, mmiri sludge, iyo sulu, wdg.
Nhazi usoro mmepụta
Anyị na-enye usoro zuru oke nke ahịhịa na-emepụta ahịhịa na-enweghị ihe na-adịghị mkpa. Mmepụta akara ngwá tumadi na-agụnye igwekota, disk feeder, ala extrusion granulation igwe, ala sieve igwe, belt ebu, akpaka nkwakọ igwe na ndị ọzọ inyeaka akụrụngwa.
Dị ka ọkachamara na-emepụta fatịlaịza na-emepụta akara akụrụngwa, anyị na-enye ndị ahịa ngwá ọrụ mmepụta na ihe ngwọta kachasị mma maka ikike ikike mmepụta dị iche iche dị ka tọn 10,000 kwa afọ ruo tọn 200,000 kwa afọ.
1. Mechanical mgbali granulation na-eji na-enweghị kpo oku ma ọ bụ humidifying ngwaọrụ.
2. Adabara thermally chebaara ngwaọrụ, dị ka ammonium bicarbonate
3. Ọ dịghị mkpa ikpocha usoro ahụ, na obere itinye ego na obere ume ike.
4. Enweghị mmiri mmiri, nsị ikuku gas, enweghị mmetọ gburugburu ebe obibi.
5. Na urughuru size nkesa bụ edo, na e nweghị nkewa na agglomeration.
6. Kọmpat layout, elu uzu, anụ ọrụ na-adaba adaba mmezi.
7. Ọ dị mfe ịrụ ọrụ, dị mfe ịghọta njikwa na-akpaghị aka, ma melite arụmọrụ mmepụta.
8. Enwere ọtụtụ ngwa akụrụngwa na-enweghị ọrụ arụmọrụ pụrụ iche.
Ọ dịghị ihicha extrusion granulation mmepụta akara na-agụnye akpaka batcher, belt ebu, abụọ-axis blender, diski feeder, extrusion granulation igwe, ala echetakwa igwe, okokụre nkwakọba, akpaka nkwakọ igwe, wdg
1. Dynamic batch igwe
Igwe akụrụngwa akụrụngwa na-eri nri dị ka usoro usoro ọ bụla, nke nwere ike mezue usoro ịsa ahụ na oke nkenke na arụmọrụ, iji hụ na fatịlaịza dị mma. Mgbe ihe ndị ahụ mejupụtara, a na-ebuga ihe ahụ na blender axis.
2. Ugboro abụọ aro Fatịlaịza igwekota
Ihe nkpuchi diski a na - eji ihe eji agho cycloid agịga iji mee ka ọ gha - Na-aga n'ihu tụgharịa na-akpali akpali nke UM UBARA on armgwakọta ogwe aka, na ngwaọrụ n'ụzọ zuru ezu agwakọta. A na-ekpochapụ ngwakọta agwakọta site na npụpụta dị na ala. Diski ahụ na-anabata efere polypropylene ma ọ bụ ihe nchara igwe anaghị edozi, nke na-adịghị mfe ịrapara ma dị mfe ma dị irè.
3. Roll Extrusion Granulator
A na-ebufe ngwakọta agwakọtara site na eriri na-ebufe ihe na diski diski, nke na-ezigakwa ihe a na-emepụta ihe ntanetị anọ n'okpuru onye na-enye nri site na hopper. Igwe ahụ na-apịkọta ihe ahụ n'ime iberibe n'ime ime ụlọ gbajiri agbaji n'okpuru igwe site na ntụgharị ntụgharị dị elu na-agbagharị, wee kewaa ihe ndị achọrọ ka mkpịsị anụ ọhịa wolf abụọ na-atụgharị. A na-emegharị ahụ nke ihe nrụrụ ọhụrụ na-eguzogide ọgwụ, ihe na-eguzogide ọgwụ na mmetụta na-eguzogide ọgwụ.
4. Rotary Drum Screene
A na-ebuga ihe ndị a na-eme ka a na-emegharị ihe na-eme ka ihe na-emegharị ihe site na onye na-ebu belt, na ihe ndị na-adịghị mma na-esi na nnukwu ntanetụ n'akụkụ n'akụkụ site na oghere ihuenyo, wee gaa na diski feed maka ihe nkedo nke abụọ, ma ndị ruru eru na-eri nri site na ebufe ụzọ nkwụsị ala ma wega ya na mpaghara agwụ.
5. Igwe Igwe Nkwakọ ngwaahịa Electronic
Site na hopper, a na-atụle ihe ndị tozuru oke n'ọtụtụ, wee tinye ya na igwe akụrụngwa akpaka.
WuLong Industrial Park, Xingyang District, Zhengzhou City, Henan ógbè, China
AKWKWỌ ỌH NEWR NEW